के हो करिम बेन्जमा दोषी ठहरिएको प्रकरण ? अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । रियल म्याड्रिडबाट खेल्ने फ्रेन्च स्ट्राइकर करिम बेन्जमालाई एक पुरानो प्रकरणमा दोषी ठहर गरिएको छ । बेन्जमा फ्रान्सेली फुटबल खेलाडी म्याथ्यू भाल्वुयनाको यौन भिडियो राखेर ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो ।
बुधबार एक न्यायाधिशले बेन्जमालाई एक वर्षको निलम्बित जेल सजाय तथा ७५ हजार युरो जरिवाना सुनाएका छन् ।
भाल्वुयनासँग रकम असुली गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा बेन्जामासहित पाँच जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
२०१५ को यस घटनापछि विश्व फुटबल समुदायलाई स्तब्ध तुल्याएको थियो भने दुबै खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा आफ्नो स्थान गुमाएका थिए ।
सन् २०१५ मा दुबै खेलाडी फ्रान्स टिमको अभ्यासका क्रममा रहदा सो घटना भएको थियो । बन्द प्रशिक्षणमा हुदा बेन्जमाले भाल्वुयनालाई ब्ल्याकमेलरलाई रकम दिन दबाब दिएका थिए ।
तर बेन्जमाले भने सो आरोप अस्विकार गर्दै आएका थिए ।
अदालतले सुनाएको यो सजाय विरुद्ध बेन्जमाले अपिल गर्न पाउने भएका छन् । उनका वकिलले यस फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने बताएका छन् ।
यो सजायपछि के बेन्जामा जेल जान्छन त ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यस सजायमा उनी जेल जानु पर्दैन । दुई बर्षभन्दा कम सजायमा अन्य अपराध नगरेको अवस्थामा जेल जानु नपर्ने र जरिवानाको रकम भने तिर्नुपर्ने बुझिएको छ ।
त्यस्तै बेन्जमाले फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमबाट समेत खेल्नलाई कुनै बाधा नपर्ने बताइएको छ । फ्रेन्च फुटबल फेडेरेसनका अध्यक्ष नोएल ली ग्राएटले बेन्जमा खेल्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रियल म्याड्रिडमा लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका बेन्जमालाई यस घटनाको करिब ६ बर्षपछि २०२० को युरो अगाडी फ्रान्सको राष्ट्रिय टिममा फेरी बोलाइएको थियो । राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेपछि बेन्जमाले फ्रान्सका लागि १३ खेल खेल्दै ९ गोल गरेका छन् । बेन्जमाले अहिलेसम्म फ्रान्सका लागि कुल ९४ खेलमा ३६ गोल गरेका छन् ।
मौरिससविरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टिमको घोषणा, को को परे ?
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले मौरिसससँग हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सबै ३४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । मौरिसससँग हुने दुई खेलमा यी खेलाडीले खेल्ने छन् । प्रशिक्षक
मार्सियलले म्यानचेस्टर युनाइटेड छोडे, लोनमा सेभियाबाट खेल्ने
काठमाडौँ । एन्थोनी मार्सियल अन्ततः म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट लोनमा स्पेनिस क्लब सेभिया गएका छन् । लामो समयदेखि मार्सियल युनाइटेडमा खेल समय नपाएका कारण असन्तुष्ट रहेका थिए । मार्सियलले आफ्नो पारिश्रमिक घटाउन तयार हुदै
बालोटेली इटालियन राष्ट्रिय टिममा कमब्याकको तयारीमा
काठमाडौँ । इटालियन फुटबलर मारियो बालोटेली तीन बर्षपछि राष्ट्रिय टिममा फर्किने तयारी गरेका छन् । प्रशिक्षक रोबर्टो म्यानचिनीले बालाटोलीलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि सम्भावित ३५ खेलाडीको सूचीमा राखेर उनको राष्ट्रिय टिममा
काठमाडौं । दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न मौरिससको टिम नेपाल आईपुगेको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली र रमेश रायमाझीले खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्